Carlton Tower Jumeirah oo ku taal London in dib loo furo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Warshadaha Warshadaha » Carlton Tower Jumeirah oo ku taal London in dib loo furo
Jebinta Wararka Yurub • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka UK • Wararka kala duwan
Carlton Tower Jumeirah oo ku taal meel ka soo jeedda dunida caanka ah ee Sloane Street iyo astaamaha muhiimka ah ee London, waa goob casri ah oo casri ah oo casri ah oo taariikh taariikhi ah leh waxaana dib loo furi doonaa 1-da Juun ka dib dib-u-habaynta Rifai.
Dhismaha Carlton Tower Jumeirah wuxuu albaabada u furi doonaa 1-da Juun, 2021-ka London's moodal Knightsbridge,
Ka dib 18 bilood oo loo xiray dib u habeyn, hoteelka waxaa ku dhacay isbadalkii ugu balaarnaa ee taarikhdiisa, iyadoo ay ku baxday lacag ka badan £ 100 milyan.
Kooxda Jumeira waa shirkad Imaaraadku maamusho oo maamusha hoteellada.
Aaron Kaupp, Madaxweyne ku xigeenka Gobolka ee guryaha London, Jumeirah Frankfurt iyo Maareeyaha Guud ee Carlton Tower Jumeirah ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno martidayada qiimaha badan ka dib maalgashi muhiim ah iyo dayactir dhameystiran oo huteelka ah, oo leh qolal cusub, qurxiyo makhaayad, dalxiis iyo albaab laga soo galo. Furitaankan taariikhiga ah waxaa loo dejiyay dhanka aafada safka hore, taasoo aragtay adduunka iyo warshadaha aan jecel nahay inay la kulmaan dhibaato aad u daran. Dhismaha Carlton Tower Jumeirah wuxuu noqon doonaa iftiin rajo inta lagu jiro waqti aad u adag dhammaanteen. Waxaan mar kale noqon doonnaa meel nalagu arko, oo tiir-dhexaad u ah bulshada London, iyo sidoo kale hoggaamiye soo dhoweyn heer sare ah oo adduunka ah. ”
Huteelku wuxuu hayaa sumcaddiisa adduunka lagu yaqaan ee loogu talagalay adeegga heerka koowaad iyo feejignaan taxaddar leh oo faahfaahsan, waxaana dib loogu cusboonaysiiyay jiil cusub oo marti sharaf ah.
Hantidan oo ah shan xiddig ayaa markii hore la furay 1961 oo ahayd hoteelkii ugu horreeyay ee London waxaana loo dabaaldegay inuu ahaa kan ugu dheer London waqtigaas. Dhismaha Carlton Tower wuxuu ahaa astaanta soo jiidashada: waa meesha la arko oo la arko, halkaasoo ay u yimaadeen xidigo caalami ah iyo kuwa bulshada ku xeel dheer ee Chelsea inay u ciyaaraan. Asal ahaan waxaa qaabeeyey Henry End, sidoo kale mas'uul ka ah gudaha hoteelka Plaza ee magaalada New York, hoteelka waxaa hadda loo beddelay istiraatiijiyad gudaha iyo naqshad dhismeedka lagu qiimeeyo '1508 London'. Dhaqanka nashqadeynta ayaa soo jiitay hidaha hudheelka hudheelka iyo goobta si loo abuuro muuqaal casri ah oo leh waqti aan la soo koobi karin, gudaha la safeeyey iyo dareen weynaan. Ixtiraamida dhismaha asal ahaan, qaab casri ah oo casri ah, 1508 London waxay dahaartay iskudhaf isku dhafan oo qaabdhismeedka dhismayaasha daaraha ku hareereysan iyo guryaha, iyadoo lagu darayo geesaha jilicsan ee jilicsan, boodhadhka midabka dhalaalaya iyo foomamka dhiirrigelinta dabiiciga ah ee dhammaan. Huteelka hudheelka ah ee hudheelka ah ee ka hadlaya Cadogan Gardens, jardiinooyinka gaarka loo leeyahay ee loogu talagalay 1804, ayaa ka sii muuqanaya hudheelka oo dhan, xusuusinta martida marinka gaarka ah ee ay u leeyihiin meeshan cagaaran ee cagaaran iyo garoomada tennis-ka, oo caadi ahaan u furan dadka deegaanka.
Qolal iyo Qolal
186 qolalka martida ee sida quruxda badan loo magacaabay dhammaantood waa la dayactiray heerkii ugu sarreeyay, oo loogu talagalay in lagu bixiyo dareen xasillooni leh xoojinta nalka iyo booska. Ku dhowaad 50% furayaasha Carlton Tower waa qolal, oo ka tarjumaya doorbidyada taariikhiga ah ee hudheellada hudheelku u leeyahay boos ballaadhin iyo joogitaan dheeri ah. 87 ka mid ah qolalka iyo qolalku waxay leeyihiin faa iidada wanaagsan ee balakoonka, iyagoo ka faa'iideysanaya aragtiyada cajiibka ah ee ku baahsan London. Isku darka bilicsanaanta casriga ah ee qaabka ugu yar leh, hoyga ayaa ka kooban darbiyada derbiyada qaabaysan, qalabka guryaha oo qaabab jilicsan leh iyo lahjadaha midabbada diirran ee midabka leh oo ay saameeyeen hiddaha Ingiriiska ee buluug, cagaar iyo maroon qoto dheer iyo sidoo kale sagxadda musqusha marmar saqafka sare leh musqulaha by Grown Alchemist. Cusub ayaa la abuuray waa Royal Suite, oo ah hoyga hudheelka ee ugu qaaska ah oo ka kooban saddex qol jiif oo leh ikhtiyaar ah in dabaqa oo dhan loo gaar yeelo sida ugu fiican xagga amniga iyo ikhtiyaar.
Imaanshaha iyo Goobaha Dadweynaha
Soo bandhigida imaatinkeeda iyo calaamadeynta booska hudheelku inuu yahay dhisme casri ah oo casri ah magaalada London furitaankiisii ​​wuxuu ahaa hawlgalinta farshaxan weyn oo dibadeed oo ay samaysay Dame Elisabeth Frink (1930-1993), oo ah farshaxanyahan bilowgii hawsheeda 1961 oo imika la qiray mid ka mid ah fanaaniinta ugu muhiimsan Ingriisiga xilligeeda. Sawir gacmeedkan ayaa la hayaa oo la soo celiyay, oo muhiim u ah marinka 'porte cochere' oo ku sii socda albaabbada dhalooyinka u rogaya ee dib loo habeeyay. Albaabadaas oo loo maro albaabku naqshadeynta hool weyn oo Ingiriis ah oo leh abuuritaanka meel aad u sareysa oo laba jibbaaran. Dhexdeeda gudaheeda waxaa laga joojiyaa qalab wax lagu duubo oo loo yaqaan 'flapoke chandelier' kaas oo ku jira tarjumaad aan la taaban karin oo ah chrysanthemum, oo lagu dhiirrigeliyey taariikhda Cadogan Gardens 'oo ah beero dhir leh. Laga soo galo hoolka waa 'The Chinoiserie', hudheelka aaggiisa aadka loo jecel yahay maalintii oo dhan, oo hadda loo beddelay qaab quruxsan oo fudud. Iyadoo fikradda hal-abuurka leh ee loo yaqaan 'Cake-saac' u adeegta patisserie maalinta oo dhan, iyo sidoo kale noocyo badan oo caalami ah iyo liis cabitaan ballaaran, qolkani wuxuu dib ula soo noqon doonaa booskiisii ​​saxda ahaa ee goobta bulshada ee Knightsbridge. Intaa waxaa sii dheer, baarka loo yaqaan 'lobby bar' ee dhowaan la abuuray ayaa bixiya khibrad sifeysan oo ku saabsan hareeraha soo jiidashada leh.
Makhaayada Al Mare
Makhaayada u socota hudheelka 'Al Mare' waxay bixisaa khibrad casri ah oo soo dhaweyn leh oo ay ku dheehan tahay dhammaan soo jiidashada cunnooyinka Talyaaniga, labadaba caan iyo raaxo. Makhaayadu waxay u oggolaaneysaa khibrad, waayo-aragnimo gastronomic ah, qaadashada martida safarka ah ee loo marayo Talyaaniga waxayna leedahay qol masrax, qolka cuntada gaarka loo leeyahay iyo cuntada al fresco. Huteelka Maamulaha kuugga iyo kuugga madaxa Al Mare waa hooyo Talyaani ah oo lagu magacaabo Marco Calenzo, kaasoo hoteelka kaga soo biiray Zuma oo uu ka ahaa Kuugga Fulinta. Tan ka hor Marco wuxuu u shaqeeyay afar xilli oo Hoteello caalami ah iyo sidoo kale Lanesborough oo ku taal London.
Naadiga Fudud ee Fiinta & Isboortiga
Naadiga caanka ah ee caafimaadka ee hudheelka 'The Peak Fitness Club & Spa' oo ku yaal sagx dabaq ayaa gabi ahaanba dib loo habeeyay. Qolal daaweyn cusub ayaa laga sameeyay Talise Spa oo ku yaal dabaqa labaad iyo aagga barkadda dabaasha oo dib loo soo nooleeyay. Barkadani waa tan ugu weyn London ee ku taal hudheel leh iftiin dabiici ah oo gudaha ah oo dhalaalayana waxaa lagu soo kordhiyaa aragtiyo iyada oo loo marayo saqafkeeda muraayadda dhererkiisu yahay laba jibbaaran, oo lagu daboolay cabanas dhinacooda lagu nasto Intaa waxaa sii dheer, Peak wuxuu bixiyaa fasalo istuudiyaha ah, iyo qolka jimicsiga oo lagu soo bandhigo qalab loo yaqaan 'Technogym' oo ku yaal dabaqa sagaalaad, kaas oo iska indha tiraya makhaayadaha iftiinka badan ee 'Peak' oo leh aragti neefsasho leh oo caasimada ku baahsan. Iyada oo qaabkeeda cusub iyo astaamaheeda iyo sidoo kale xubin xadidan oo xadidan, The Peak waxay umuuqataa inay dib ula wareegi doonto booskeeda safka hore ee adduunka ladnaanta raaxada London.
Iyadoo la raacayo tilmaamaha dowladda ee looga jawaabayo Cudurka faafa ee COVID-19, The Carlton Tower Jumeirah ayaa bixin doonta adeegga aan fiicnayn ee loo yaqaan, iyada oo si taxaddar leh u dhigeysa soo dhaweynta hal dhinac, oo leh kaamirooyinka kuleylka kuleylka ah, si loo yareeyo adeegga iyo ciriiriga ka jira foyga. Qolalka jiifka oo dhami waxay leeyihiin daaqado u furan si ay u oggolaadaan hawo dabiici ah, iyo meelaha caamka ah ee hudheelka ayaa u hoggaansami doona xeerarka, oo ay ku jiraan PPE ku habboon makhaayadaha iyo shaqaalaha hudheelka.